QM oo ka hadashay Doorashada Soomaaliya | Baydhabo Online
QM oo ka hadashay Doorashada Soomaaliya
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa ka hadlay arrimo la xiriira Doorashooyinka sanadkan dalka ka dhacaya iyo Hanaanka lagu soo xulayo xildhibaanada Aqalka Hoose.
Ugu horeyn Michael Keating ayaa ka hadlay caqabadaha hortaagan soo xulista xildhibaanada Aqalka Hoose, waxaana uu sheegay in ay suuragal tahay in xilligii loogu talagay ay dib uga dhacdo Doorahada, maadaama weli uusan muuqan dhaq dhaqaaq aad u sareeya.
Waxa uu sheegay Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating Doorashada Soomaaliya caqabada ugu weyn ee hada heysata in ay tahay soo xulista xildhibaanada Aqalka Hoose, oo weli muran badan uu ka taagan yahay.
Michael Keating ayaa walaac ka muujiyay in Musuq maasuq lagu sameeyo Doorashada Soomaaliya iyo in ay dhacdo in la kala iibsado codadka Musharaxiinta lagu dooranayo, isagoo sidoo kale sheegay in isbuucyada soo socda ay rajeynayaan in Gobolada Dalka ay ka bilaabato soo xulista xildhibaanada Aqalka Hoose.
Ugu dambeyntii Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa walaac ka muujiyay Amniga Musharaxiinta u tartamaya Madaxtinimada Soomaaliya, waxaana uu Hay’adaha Amaanka ugu baaqay in ay sugaan Amniga Musharaxiinta.